Mutsva WTTC mushumo wekufambisa kupora uye kusimudzira kutsiga kweKufamba & Yekushanya chikamu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mutsva WTTC mushumo wekufambisa kupora uye kusimudzira kutsiga kweKufamba & Yekushanya chikamu
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutsva WTTC mushumo wekufambisa kupora uye kusimudzira kutsiga kweKufamba & Yekushanya chikamu.
World Travel & Tourism Council inodyidzana neBazi reKushanya kweSaudi Arabia pamushumo mutsva wakakosha unonongedza mapoinzi makuru ekudzoreredza mafambiro epasirese, uye kurudziro yekufambisa kudzoreredza kwechikamu cheTravel & Tourism, uku ichiwedzera kusimba kwayo.
Yepamusoro yekuyedza mitengo uye kuenderera kwekufamba zvirambidzo zvinotadzisa kuwanikwa kwekufamba uye kugadzira elitist system.
Ne 34% chete yehuwandu hwepasi rose hwakabaiwa zvizere, kusaenzana kwemajekiseni kunotyisidzira kusimuka kwehupfumi.
Mupiro weichi chikamu kuGDP yepasi rose wakadonha kubva pamadhora US $ 9.2 trillion muna 2019, kusvika kungosvika US $ 4.7 trillion muna 2020, zvichimiririra kurasikirwa kweUS $ 4.5 trillion.
The World Kufamba & Yekushanya Kanzuru (WTTC) uye Ministry of Tourism yeSaudi Arabia yaparura nhasi mushumo mutsva unokosha uyo unoratidza pfungwa huru dzekudzoreredza kufamba kwenyika dzese, uye kurudziro yekufambisa kudzoreredza chikamu cheTravel & Tourism, uku ichiwedzera kutsiga kwayo.
Nedenda iri richiunza mafambiro epasirese kuti amire, nekuda kwekuvharwa kwemuganhu uye zvirambidzo zvakakomba zvekufamba, Kufamba & Tourism yakatambura kupfuura chero chikamu chipi nechipi mumwedzi gumi nemisere yapfuura.
Mupiro weichi chikamu kuGDP yepasi rose wakadonha kubva pamadhora US $ 9.2 trillion muna 2019, kusvika kungosvika US $ 4.7 trillion muna 2020, zvichimiririra kurasikirwa kweUS $ 4.5 trillion. Uyezve, apo denda rakaputika mukati memwoyo wechikamu, anokatyamadza mamirioni makumi matanhatu nemaviri eKufamba & Tourism mabasa akarasika.
Chirevo chitsva ichi chinosimbisa WTTCZviyero zvehupfumi zvazvino zvinoratidza kudzoreredza kwechikamu kuchaita zvishoma pane zvaitarisirwa gore rino, zvine chekuita nekuvharwa kwemuganho uye matambudziko ane chekuita nekufamba kwenyika.
Mupiro wechikamu kuGDP unotarisirwa kukwira ne 30.7% gore-pa-gore muna 2021, inomiririra chete US$ 1.4 bhiriyoni kuwedzera, uye pamwero wazvino wekupora, mupiro weKufamba & Tourism kuGDP unogona kuona gore rakafanana- pa-gore kusimuka kwe31.7% muna 2022.
Zvichakadaro, mabasa ebazi iri ari kutarisirwa kukwira nechikamu chimwe chete nechidimbu kubva muzana gore rino, anomirira mamiriyoni maviri emabasa, zvichiteverwa nezvikamu gumi nezvisere kubva muzana gore rinouya.
Inomiririra dambudziko rakaipisisa kune chikamu cheKufamba neKushanya, COVID-19 haina kungokanganisa hupfumi hwepasirese, asi zvakare hupenyu pamwe nehupenyu hwevanhu pasirese.
Denda risati ratanga kukanganisa zvakanyanya chikamu ichi, Kufamba & Kushanya yaive imwe yezvikamu zvakakura pasi rose, iine basa rimwe chete mumana matsva akagadzirwa pasi rese pakati pa2015-2019 uye yaive yakakosha mukusimudzira hupfumi hwevanhu uye kuderedza hurombo, ichipa yakasarudzika. mikana kuvakadzi, vashoma, nharaunda dzekumaruwa, uye vechidiki.
Uyu mushumo mutsva kubva WTTC, mukubatana na Ministry of Tourism yeSaudi Arabia inoburitsa mapoinzi ekurwadziwa anotarisa padambudziko rekukurumidzira kudzoreredza mafambiro epasirese, akarongwa nekudiwa kwekugadzirisa kusasimba kwechikamu chinoratidzwa panguva yedenda nekugadzirisa zvakare ramangwana rakagadzikana, rinosanganisirwa, uye rakatsiga.
Chirevo chitsva ichi chakakosha chinoratidza kuvharwa kwemuganho wepasirese, kusava nechokwadi nekuda kwekuchinja kwemitemo, mutengo unorambidzwa wekuyedza, uye kushomeka kwekudzoreredza uye kusaenzana kwekupihwa kwegomarara kwakatadzisa kudzoreredzwa kwechikamu cheTravel & Tourism mukati memwedzi gumi nemasere yadarika.
Pakazosvika Chikumi 2020, nyika dzese dzichine imwe nzira yezvirambidzo zvekufamba, zvichiita basa rakakosha mukudonha kwemari yepasi rose ne69.4% gore iroro. Izvi zvirambidzo, zvinogara zvichichinja uye zvinovhiringa, zvakaramba zvichikanganisa zvakanyanya kusatya kwevafambi, sezvo pakanga pasina nzira yakajeka, kana kubvumirana kwepasirese, maererano nezvinodiwa zvekuyedzwa, kuvharirwa, uye zviyero zvekudzivirira.
Sekureva kweshumo, ongororo yazvino yepasirese yevafambi vepasirese yakaburitswa naOliver Wyman inoratidza chete 66% hurongwa hwekuenda kunze kwenyika mumwedzi mitanhatu inotevera, uye vasingasviki mumwe mugumi (10%) vakabhuka rwendo rwemangwana, zvichiratidza kuenderera mberi kwekusava nechokwadi. kuita sarudzo yemufambi. Inodhura PCR bvunzo dzinoramba dzichikanganisa vafambi, kudzoreredza kufambira mberi kwekuita kuti kufamba kusvike uye kugadzira kumwe kusaenzana.
Julia Simpson, Mutungamiriri & CEO WTTC, akati: "Chikamu cheKufamba neKushanya chakakosha kune raramo zhinji dzinoramba dzichikanganiswa nekutadza kuwiriranisa nekumisikidza mitemo yeCOVID-19 pasi rese. Iko hakuna chikonzero chekubata kwemitemo, nyika dzinoda kubatana uye kuwiriranisa mitemo. Nyika zhinji dzichiri kusimukira dzinovimba nekufamba kwenyika dzepasirese kuitira hupfumi hwadzo uye dzakasiiwa dzaparadzwa.
“Sezvazvakaita, chikamu che34% chete chevanhu pasi rose ndivo vakabaiwa nhomba, zvichiratidza kuti kuchine kusaenzana kukuru kwekudzivirira pasi rose. Chirongwa chekubaya chejekiseni chinokurumidza uye chakaenzana, pamwe chete nekudzokororwa kwepasirese kwemarudzi ese akatenderwa neWHO, anodiwa kuvhurazve mafambiro epasirese zvakachengeteka uye nekukasira kuita basa rehupfumi.
"WTTC inoziva kukosha kwekudzoreredza chivimbo chevatengi, uye isu takagadzira, neveruzhinji nevega vega vachishanda pamwe chete, seti yakabatana Safe Travel protocol kumaindasitiri gumi nerimwe muchikamu cheTravel & Tourism. Chitambi chedu cheSafe Travels chinozivikanwa pasi rose chakatorwa nenzvimbo dzinopfuura 11 pasi rose.
Mukuru wake Ahmed Al Khateeb, Minister of Tourism kuSaudi Arabia akati: "Chirevo ichi chinoratidza maitiro eCCIDID-19 paindasitiri yekufamba uye yekushanya yepasi rose - uye kusaenzana kwekupora kuri kuitika. Isu tinofanirwa kujeka: kunze kwekunge kushanya kwadzoreredza hupfumi hahudzoke.
"Tinofanirwa kuuya pamwe chete kuti titsigire indasitiri iyi yakaoma, iyo denda risati ramboita 10% yeGDP pasi rose. Nechishumo ichi, Saudi Arabia iri kudaidzira kuti chikamu ichi chiungane kuRedesign Tourism kuitira ramangwana rakagadzikana, rinosanganisirwa uye rakasimba. "
Chirevo ichi chinonongedza kurudziro yekuwana nekukurumidza kudzoreredza kweiyo Travel & Tourism chikamu, sezvo COVID inova denda.
Chirevo chakanangana nekubatana kwepasi rose kuvhurazve miganho, mamiriro ekuyedza akasarudzika, uye kudigital yekufambisa kufambisa, pamwe nekusimudzira uye kukanganisa kwenzanga pachikamu chebato, kuchadzorera kufamba kwepasi rose uye chikamu cheKufamba neKushanya. Matanho aya achachengetedza mamirioni emabasa, uye kugonesa nharaunda, mabhizinesi, uye nzvimbo dzekuenda dzinovimba neiyo Travel & Tourism chikamu, kupora zvizere uye kubudirira zvakare.